साल्ट ट्रेड्रिङले ७९ रुपैयाँमा बेचेको चिनी भाटभटेनीमा १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो ! – Sandesh Press
साल्ट ट्रेड्रिङले ७९ रुपैयाँमा बेचेको चिनी भाटभटेनीमा १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो !
November 4, 2021 145
काठमाडौं । सरकारले चीनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्दा अबको केही दिन भित्रैमा यसको मूल्य एक सय रुपैयाँ प्रतिकेजी पुग्ने देखिएको छ । हाल बजारमा ९५ रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्ममा व्यापारीले चिनी बिक्री गरिरहेका छन् । नेपालमा चिनी आयातको सरकारी जिम्मा पाएको कम्पनी हो, साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसन। तर, हाल कर्पोरेसनसँग पनि बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने मात्रामा चिनी मौज्दात छैन । जसले गर्दा बजार मूल्य आकासिने गति नरोकिने निश्चित भएको हो।
साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार कर्पोरेसनले हाल उपत्यकाका ६ स्थानमा स्टल राखेर प्रति ग्राहक २ केजीका हिसाबले सुपथ मूल्यमा चिनी बेचि रहेको छ। कर्पोरेसनले प्रतिकेजी ७९ रुपैयाँमा नै चिनी विक्री गरिरहेको उनले बताए । तर, बजार नियन्त्रण गर्नका लागि कर्पोरेसनसँग धेरै चिनी मौज्दात भएको भए देशैभरि यही मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि मौज्दात कम रहेकोले सो अवस्था नरहेको प्रवक्ता राजभण्डारी बताउँछन्।
गत वर्ष कर्पोरेसनले आफ्ना आउटलेटहरुबाट प्रति ग्राहक ६ केजी उपलब्ध गराएको थियो । तर, यस वर्ष भने कर्पोरेसनले ६–७ महिना देखि चिनी नै आयात नगरेकाले बजारमा पर्याप्त चिनी पठाउन नसकेको उनले जानकारी दिए । सरकारीले ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएका कारणले पनि बजारमा चिनी महँगो भएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘बजारमा अन्य आयात कर्ताहरू पनि छन् तर, अन्य आयातकर्ता र कर्पोरेसनले एकै स्थानबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने र कर पनि बराबरी नै तिर्नु परेका कारणले कर्पोरेसनले ठुलो मात्रामा चिनी आयात गर्न नसकेको हो ।’ निजी क्षेत्रले ल्याएको चिनीको मूल्य फरक हुन्छ तर, कर्पोरेसनले भने निजी क्षेत्रले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा कममा नै बेच्न पर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ ।
सरकारले कुनै सहुलियत नदिने र आफ्नो लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा चिनी बेच्न कर्पोरेसन नसक्ने भन्दै प्रवक्ता राजभण्डारीले बाध्यताबारे गुनासो गरे । उनले भने, ‘बजारमा विभिन्न गुणस्तरका चिनीहरू आएका छन् तर, कर्पोरेसनले ल्याएको गुणस्तरको चिनीको मूल्य एक सय ५० रुपैयाँमा नेपालको ठुलो सुपर मार्केट भाटभटेनीले नै बेचिरहेको छ ।’ सरकारी अनुगमन र सरकारी निकायलाई सकृय पार्दै सरकारले बजारमा बलियो उपस्थिति देखाउने हो भने यसरी उपभोक्तालाई ठगी गरि रहेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनको ठम्याई छ।
सरकारले मूल्य निय’न्त्रण नगर्ने हो भने ठुला व्यापारीले मूल्यमा ठग्ने र यही वर्ष चिनीको मूल्य एक सय रुपैयाँ प्रतिकेजी पुग्न सक्ने उनले दाबी गरे। यता, निजी चिनी उत्पादकहरूको भने आफ्नै समस्या छ । देशमा रहेको चिनी उद्योगीहरूले उखु किसानको पैसा नतिरेका कारण उखु किसानहरु उखु खेतीबाट पलायन भएकाले चिनीको उत्पादन घटेको चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालमा उखु किसानका मु’द्दा जहाँको त्यही भएका कारणले उखु किसानहरू उखु खेती गर्नबाट बाहिरिन थालेका छन् । केही चिनी मिलले उखु किसानको भुक्तानी नगरेका कारण सबै किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आइसक्यो ।’
नेपालमा उद्योग र उपभोक्ताको दुवै गरी वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये यस वर्ष १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँ छन् । सरकारलाई ७ महिना पहिला नै अब नेपालमा चिनीको अभाव हुन्छ भनेर खबर गर्दा समेत सरकारी पक्षले पहल नगरेका कारण यो चाडपर्वका बेलामा चिनीको अभाव देखाउँदै व्यापारीले मूल्य बढाएको उनले बताए । आर्थिक न्युजबाट साभार
Prevबिहीबार भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, सावधान ! नसोचेको हुनसक्छ …
Nextआज लक्ष्मी पूजा, धन र समृद्धिको कामनासहित पूजाआरधना गरी मनाइँदै
यी हुन् अर्काकी पत्नीमाथी आँखा लगाउँदा श्रापमा परेका देवता